ပရိသတ်တွေကို အံ့သြသွားအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
အမြွှာလေးတွေလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ရုတ်တရက် အရမ်းအံ့သြသွားရပြီး တစ်ပြိုင်တည်း ကလေးလေး နှစ်ယောက်ရတော့မှာ ဖြစ်လို့ အရမ်းကို ပျော်ရပါတယ်လို့ ခိုင်သင်းကြည်က ဆိုပါတယ်။
Photo : ခိုင်သင်းကြည် FB
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မခိုင်လေးက သူ့ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေကို အံ့သြသွားအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမြွှာရင်သွေးလေးတွေ (၁၀) ပတ်ရနေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့တာပါ။ ဘာလေးမှန်းတော့ မသိသေးပေမယ့် အမြွှာလေးတွေလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ရုတ်တရက် အရမ်းအံ့သြသွားရပြီး တစ်ပြိုင်တည်း နှစ်ယောက်ရတော့မှာ ဖြစ်လို့ အရမ်းကို ပျော်ရပါတယ်လို့ ခိုင်သင်းကြည်က ဆိုပါတယ်။
"အမွှာ" တဲ့! 10 ပတ်ရနေပြီ။ အထီး အမတော့ မသိရသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းသာရလွန်းလို့မျှဝေလိုက်တာပါ။ ရုတ်တရာက် အရမ်း အံ့သြ သွားရပေမဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ နှစ်ယောက်ရမယ်ဆိုတော့ အရမ်းပျော်ရပါတယ်။" ဆိုပြီး စက်တင်ဘာ (၁၂) ရက်နေ့က သူမက ဖေ့စ်ဘွတ် မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ဟာ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ အမြွှာ ကလေးနှစ်ယောက် ရဲ့ မိဘတွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိပေမယ့် သူတို့ကိုယ်စား ပျော်လွန်းလို့ မျှဝေပေးလိုက်တာပါဆိုပြီး ခိုင်သင်းကြည်က ပရိသတ်တွေကို စနောက်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘယ်သူနဲ့မှ မပြိုင်ချင်ဘူးလို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
"ဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း ကျွန်မသိပေမဲ့ သူတို့ကိုယ်စား ပျော်လွန်းလို့ မျှဝေလိုက်တာပါ။ I don’t know who the happy parents are. But I share their joy! #crd Ma Saw Thuzar" ဆိုပြီး ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်း ခိုင်သင်းကြည် ရေးထားတဲ့ စာလေးကို ကြည့်ပြီး အံ့သြသွားတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ ခန့်စည်သူကလည်း ဂျင်းထည့်တယ်နော်ဆိုတဲ့ ကောမန့်လေးပေးထားသလို ချစ်သုဝေကလည်း အမြွှလေး တစ်ကယ်ယူဖို့ အားပေးထးတာတွေ့ရပါတယ်။
ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ သမီးလေး စံထိပ်ထားကတော့ "မေမေနော်! မနောက်နဲ့" ဆိုတဲ့စာလေးကို ကောမန့်ပေးထားပါသေးတယ်။
ဘယ္သူနဲ႕မွ မၿပိဳင္ခ်င္ဘူးလို႕ ရင္ဖြင့္လာတဲ့ ခိုင္သင္းၾကည္
'' မခုိင္ရဲ႕ ကာရုိက္တာေလးကေတာ့ ျမင္ေနၾကအတိုင္းပဲေပါ့ေနာ္။ သြက္သြက္လက္လက္ေလးနဲ႔ ေစ်းေရာင္းရမယ္။ ေစ်းသည္ ကာရုိက္ တာ ေလးပါ သနပ္ခါးေရာင္းရမယ္။ ကုိယ္တုိင္လည္း သနပ္ခါးလိမ္းရမယ္၊ ပြဲေစ်းတုိင္းမွာလည္း ေစ်းလုိက္ေရာင္းရမယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဟိုဘက္က ကုိလူမင္းတုိ႔ ေရႊမႈံရတီတုိ႔လည္း အဲ့ဒီလုိပါပဲ'' လုိ႕ သူကေျပာပါတယ္။